Ny fihodinana sperm dia ny fitsipika. Ahoana no hampitombo ny sivilizasiona?
Ny fiantraikan'ny spermatozoa - amin'ny zavatra miankina aminy sy ny fomba hanatsarana ny fahavokarana lahy?
Mpivady mikasa ny hameno, saingy tsy afaka misaina mandritra ny herintaona mahery, dia tokony hampandre ny fanadihadiana. Ary ny olana dia tsy afaka ny hisarihana ny tsy fahombiazan'ny rafitra fananahana vehivavy, fa koa amin'ny ampahany mitovy amin'ny mety ho voan'ny aretina lahy . Tsy ny anjara andraikitra sasantsasany amin'izany dia ny tsy fahampian'ny fihetsika spermatozoa.
Fanombanana ny fihenan'ny spermatozoa
Ireo sela manerantany ihany no afaka miditra amin'ny atody vavy, izay afaka mandresy vato misakana maro ary tonga any amin'ny tavoahangy trompetra. Mba hamaritana ny asany, dia natao ny fitsirihana manokana momba ny fihenjanan'ny spermatozoa, natao nandritra ny fanadihadiana momba ny mikrosopia amin'ny fanaovana ejaculate lahy. Ny fanadihadiana toy izany dia antsoina hoe spermogram ary ahitana ny fametrahana indostrialy maromaro mba hanombanana ny mety hisian'ny zaza iray , hamantarana ny aretina sasany amin'ny rafitra fananahana.
Ny fihenan'ny spermatozoa dia raisina amin'ny alalan'ny haingo sy ny fitantanana ny hetsika. Amin'ny alàlan'io teny io dia midika hoe fahafaha-manao sperms ny fanaovana fihetsiketsehana mivantana amin'ny rindilinina miaraka amin'ny hafainganam-pandeha izay tsy ambany noho ny mahazatra. Raha toa ny cellules dia manao fihodirana, boribory na karazana hetsika hafa na mifindrafindra haingana, dia miresaka momba ny fahalemen'ny fahalemena. Ny fanandramana mikrosopia amin'ny spermia dia tokony ataon'ny laboratoara iray manana traikefa ampy tsara amin'ity sehatra ity.
Ny fihodinana sperm dia ny fitsipika
Ny fikarakarana ny fanadihadiana momba ny fihetsika spermatozoa, ny halehiben'ny fihetsik'izy ireo dia napetraka ho isan-jato, amin'ny fiheverana ny spermatozoa rehetra eo amin'ilay sary. Araka ity fampahalalana ity, ny selan'ny lahy dia sokajy ho vondrona efatra:
A - haingana sy mivantana (haingana maherin'ny 50 mcm / s);
B - miadana fa mivantana mivantana;
C - fanekena fihetsika tsy mihetsika na fihetsika mora miadana;
D dia voafetra.
Ao amin'ny cellule normaly ho an'ny tarika voalohany dia tokony mihoatra ny 25%, ary ny totalin'ny voalohany sy faharoa - fara fahakeliny 50%. Ny spermatozoa tsy misy fihetseham-po dia tokony ho latsaky ny antsasaky ny isa, ary ny sela izay tsy manana hetsika hentitra dia tsy mihoatra ny 2%. Ankoatr'izany, ny isan'ireo cellules tena mihetsiketsika dia raisina an-tsoratra, ny faharetan'ny fifindrany dia voafaritra. Noho izany, ny fandinihana dia atao mandritra ny adiny roa ao amin'ny thermostat ary ny fizahana maso faharoa dia natao. Mandritra io fotoana io dia tsy mihoatra ny 20% ny fahasimban'ny indostrian'ny fampivelarana.
Raha mampihena ny fihenan'ny spermatozoa ny fanadihadiana, dia antsoina hoe astenozoospermia io toe-javatra io ary mizara ho telo degre:
Mora - Ny hafanan'ny hetsiky ny sokajin'ny sokajy A sy B, tapa-potoana adiny aorian'ny ejaculation, dia voamarika ho an'ny fahita amin'ny 50% amin'ny spermatozoa.
Mora - ora iray aorian'ny fanangonam-peo fanadihadiana, maherin'ny 70% ny sela ao amin'ny sokajy D.
Ny tavy - Ejaculate dia manana 80% ny spermatozoa tsy manona sy tsy atypical.
Miorina amin'ny angon-drakitra voatondro, ny tetika ara-pahasalamana dia voafaritra. Ny antony mahatonga ny tsy fahampian-tsakain'ny spermatozoa dia samy hafa - avy amin'ny aretina ao amin'ny rafitra fananahana amin'ny voka-dratsin'ny taratra amin'ny lahy. Amin'ny toe-javatra maromaro dia tsy azo atao ny miteraka antony, ary ny asthenozoospermia dia heverina ho ideopathika (manodidina ny 30% amin'ny marary).
Inona no mety ho fiantraikan'ny sperm atao?
Rehefa mikaroka ny antony mahatonga ny asthenozoospermia sy ny fahafahana miteraka ny fitomboan'ny spermatozoa, dia eritrereto ny antony maromaro mampihetsi-po:
Ny olana amin'ny rafitra endocrine - matetika ny mpitsikilo dia ny fihenan'ny testosteron hormonina noho ny fiovan'ny taona, ny ratra, ny tumors, sns. Ankoatra izany, hormones hafa - voazara amin'ny taolam-pandam-barahina sy ny tovovavy - dia mety hisy fiantraikany amin'ny kalitaon'ny ejaculate.
Aretin'ny fiarovana amin'ny arterialia - miaraka amin'ity aretina ity dia misy fandikana ny ra ara-dalàna amin'ny taovam-pananahana.
Ny varicocele dia famenoana ny lalan-tsoratry ny tadim-po, izay miteraka fitomboan'ny hafanana ao amin'ny hoditra.
Ny fiantraikany ara-pahasalamana eo amin'ny testicles, mifandraika, amin'ny alàlan'ny, ny fampiasana ny akanjo mafana, ny asa ara-pianakaviana, sns.
Tsy ampy ny vitaminina sy ny mikraoba ao amin'ny vatana, ka mahatonga ny tsy fahampian'ny firaiketan'ny proteinina ao amin'ny cellules ara-nofo.
Fahaleovan-tena naharitra, mifandray amin'ny olana ara-pananahana, fahazaran-dratsy, sns.
Olana ara-pananahana amin'ny fivoaran'ny taovam-pananahana, ao anatin'ny rafitry ny fitaovana marefo amin'ny spermatozoa.
Toe-javatra tsy mahomby (ny vokatry ny taratra electromagnetika, ny taratra, ny hafanana, ny zavatra simika, sns).
Autoimmune pathologies .
Ahoana no hampitombo ny sivilizasiona?
Taorian'ny fanatanterahana ireo fanadinana rehetra sy ny fahazoana ny sarin'ilay fototarazo efa misy dia azo atao ny mamaritra ny fomba hampitombo ny fihenan'ny spermia amin'ny tranga manokana. Ny lanjan'ny fitsaboana ara-pahasalamana dia mety samy hafa - avy amin'ny fanovana ny fiainana amin'ny fikarakarana ara-paharetana maharitra mandritra ny fotoana maharitra sy ny fitsaboana amin'ny chirurgie. Amin'ny tsy fisian'ny lozam-pifanampiana goavana, dia matetika ianao dia mila miala amin'ny fahazaran-dratsy , milalao fanatanjahan-tena, mampiditra ny zavatra ilaina ao anaty sakafo ary miaro ny tenanao amin'ny alahelo.
Fanafody ho an'ny spermatozoa
Ny fitsaboana arahin'ity olana ity dia mety ahitana tablette hampitombo ny fihenan'ny spermatozoa, mifandraika amin'ireny vondrona ireny:
testosterone fiomanana (Proviron, Androxon, Test);
midika ho fampivoarana ny rà eo amin'ny faritra (Trente, Actovegin).
Ankoatr'izay, ny lehilahy mikasa ny hanan-janaka dia azo soloina fanafody hampitombo ny fihenan'ny spermatozoa mifandraika amin'ny sakafo fanampiny:
Tenteks strong and so on.
Vitamina ho an'ny fihenan'ny spermatozoa
Raha manontany ny fomba hanatsarana ny fihenan'ny sembana, ilaina ny mikarakara ny vitaminina, ny microelements, vitamins ao amin'ny vatana:
vitamina A, E, B, D, C;
Sakafo ho an'ny fampitomboana ny asan'ny spermatozoa
Voaporofo fa matetika no mihatra amin'ny olona izay tsy manaraka ny fitsipiky ny sakafo ara-pahasalamana ny fihenan-tsasatra spermatozoa. Noho izany, ny sakafo dia tokony hanitsy aloha ary tokony hanomboka amin'ny fandavana ny sakafo haingana, sakafo matavy sy matsiro, vokatra voamaina. Ny fihanaky ny fikarakarana manaraka ao anatin'io sakafo io dia ampirisihana:
ronono, vokatra vita amin'ny ronono;
Sakafo ho an'ny zazalahy kely
Inona no tsy mampitovy ny ziogote amin'ny gametes?
Modely amin'ny taovolo mody 2013
Ny firenena madio indrindra eto an-tany
T-shirt misy karandoha
Inona no havoaka avy any Etazonia?
Sarobidy angovo avy amin'ny vokatra
Ahoana ny fomba hanaovana ny felam-bolo vaovao?
Fametrahana ny parquet
Fiompiana kamboty any an-trano